ပိုက်ဆံအိတ် (သို့) ငွေသေတ္တာထဲမှာ မထားသင့်တဲ့ လာဘ်ပိတ်စေတဲ့အရာတွေ … - Nae Thit Myanmar
February 25, 2020 Min Khant
စွမ်းအင်တွေအကြောင်းကို လေ့လာကြည့်တဲ့အခါ ဝါစတုသျှတ္တရ ပညာအရ စကြာဝဠာထဲမှာ အလိုအလျောက်သဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အရာတွေရော လူသားတွေဖန်တီးပြုလုပ်ထားတဲ့ မည်သည့်အရာမဆို အကုန်လုံးမှာ တစ်ခုထက်ပိုတဲ့စွမ်းအင်ရှိနေကြတယ် ဆိုတာ လေ့လာသိရှိခဲ့ရသလို ဒီအထဲမှာမှမိမိအသုံးပြုနေတဲ့
ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ မလိုအပ်တဲ့အရာတွေထည့်ထားမိတဲ့အခါ မကောင်းတဲစွမ်းအင်တွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး ထိခိုက်မှုတွေကြုံရသလို လာဘ်ပိတ် တာတွေ။
ငွေကြေး အလိမ်ခံရတာတွေ ဖြစ်တတ်ပြီး ကောင်းသောစွမ်းအင်တွေဖြစ်စေတတ်သည့်အရာတွေကိုသင့်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာထည့်ထားခဲ့မည်ဆိုလျှင် ငွေကြေး- အဆက်မပြတ်ဝင်သလို ကျန်းမာ ချမ်းသာ ကာ ငွေကုန် ရတဲ့ ငွေထွက်ပေါက်တွေ ပိတ်ပစ်လိုက် နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဘေလ်၊ ပြေစာ၊ ဟောင်းများ၊ receipt ဟောင်းများ ညစ်ညမ်းပုံများ၊ သေဆုံးပြီးသူများပုံ၊ ကြမ်းတမ်း ရက်စက်သော ပုံများ။(မကောင်းတဲ့ စွမ်းအင်များ ဖြစ်စေပါတယ်။)
တိုလီ မိုလီ မှတ်စု များ၊ လိပ်စာ ကဒ် အဟောင်းများ၊ သက်တမ်း ကုန်နေတဲ့- membership card များ သုံးမရအောင် စုတ်ပြတ် နေတဲ့ ငွေစက္ကူများ
ခေါက်တွန့် နေတဲ့- ငွေစက္ကူများ (ခေါက်နေတဲ့ ပိုက်ဆံ ကို ဖြန့်ထည့်ပါ။)
သွားရည်စာ မုန့်တွေ နဲ့ ဆေးများ။ (ဆေးများ ဟာ- ကျန်းမာရေး ပြသနာကို ထပ်ခေါ်ပေးနေလို့ ခွဲဆောင်ပါ။)
လက်သည်းညှပ် နဲ့ ကပ်ကြေး အပါအဝင်- ချွန်ထက်တဲ့ အရာများ။
ကျွမ်းကျင်သော နက္ခတ်ပညာရှင် အဆင့် ဆရာ၏ အကြံပေးခြင်း မဟုတ်သော- အဆောင်များ၊
ပရိတ်ချည်၊ လက်ဖွဲ့ စသည်များ (သီးသန့် ထားပါ။)
သင့်ပိုက်ဆံအိတ်(သို့မဟုတ်) ငွေသေတ္တာထဲမှာထည့်ထားသင့်တဲ့အရာတွေကတော့ . . . .
လက်ချမီး မယ်တော်ပုံ- ရုပ်ပုံတော် ဖြစ်စေ- ကြေး ဒင်္ဂါး ဖြစ်စေ.
ဗောဓိညောင်ရွက် (အထူးသဖြင့်- နှလုံး ရောဂါ ရှိသူများ အတွက်)
ပင်လယ်ခရုခွံများ (စကြာဝဠာ စွမ်းအင်ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။)
ဆန်စေ့ ၂၁- စေ့ (အင်မတန် အကျိုးများပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ရှင်းပြပေးပါ့မယ်။)
ဂျင်း ဖက်လေးအနည်းငယ် (ငွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်စေသည်)
စှမျးအငျတှအေကွောငျးကို လလေ့ာကွညျ့တဲ့အခါ ဝါစတုသြှတ်တရ ပညာအရ စကွာဝဠာထဲမှာ အလိုအလြောကျသဘာဝအတိုငျးဖွဈပျေါလာတဲ့ အရာတှရေော လူသားတှဖေနျတီးပွုလုပျထားတဲ့ မညျသညျ့အရာမဆို အကုနျလုံးမှာ တဈခုထကျပိုတဲ့စှမျးအငျရှိနကွေတယျ ဆိုတာ လလေ့ာသိရှိခဲ့ရသလို ဒီအထဲမှာမှမိမိအသုံးပွုနတေဲ့
ပိုကျဆံအိတျထဲမှာ မလိုအပျတဲ့အရာတှထေညျ့ထားမိတဲ့အခါ မကောငျးတဲစှမျးအငျတှဖွေဈပျေါတတျပါတယျ။
ကနျြးမာရေး၊ လူမှုရေး ထိခိုကျမှုတှကွေုံရသလို လာဘျပိတျ တာတှေ။
ငှကွေေး အလိမျခံရတာတှေ ဖွဈတတျပွီး ကောငျးသောစှမျးအငျတှဖွေဈစတေတျသညျ့အရာတှကေိုသငျ့ပိုကျဆံအိတျထဲမှာထညျ့ထားခဲ့မညျဆိုလြှငျ ငှကွေေး- အဆကျမပွတျဝငျသလို ကနျြးမာ ခမျြးသာ ကာ ငှကေုနျ ရတဲ့ ငှထှေကျပေါကျတှေ ပိတျပဈလိုကျ နိုငျပါလိမျ့မယျ။
ဘလျေ၊ ပွစော၊ ဟောငျးမြား၊ receipt ဟောငျးမြား ညဈညမျးပုံမြား၊ သဆေုံးပွီးသူမြားပုံ၊ ကွမျးတမျး ရကျစကျသော ပုံမြား။(မကောငျးတဲ့ စှမျးအငျမြား ဖွဈစပေါတယျ။)
တိုလီ မိုလီ မှတျစု မြား၊ လိပျစာ ကဒျ အဟောငျးမြား၊ သကျတမျး ကုနျနတေဲ့- membership card မြား သုံးမရအောငျ စုတျပွတျ နတေဲ့ ငှစေက်ကူမြား
ခေါကျတှနျ့ နတေဲ့- ငှစေက်ကူမြား (ခေါကျနတေဲ့ ပိုကျဆံ ကို ဖွနျ့ထညျ့ပါ။)
သှားရညျစာ မုနျ့တှေ နဲ့ ဆေးမြား။ (ဆေးမြား ဟာ- ကနျြးမာရေး ပွသနာကို ထပျချေါပေးနလေို့ ခှဲဆောငျပါ။)
လကျသညျးညှပျ နဲ့ ကပျကွေး အပါအဝငျ- ခြှနျထကျတဲ့ အရာမြား။
ကြှမျးကငျြသော နက်ခတျပညာရှငျ အဆငျ့ ဆရာ၏ အကွံပေးခွငျး မဟုတျသော- အဆောငျမြား၊
ပရိတျခညျြ၊ လကျဖှဲ့ စသညျမြား (သီးသနျ့ ထားပါ။)
သငျ့ပိုကျဆံအိတျ(သို့မဟုတျ) ငှသေတ်ေတာထဲမှာထညျ့ထားသငျ့တဲ့အရာတှကေတော့ . . . .
လကျခမြီး မယျတျောပုံ- ရုပျပုံတျော ဖွဈစေ- ကွေး ဒင်ျဂါး ဖွဈစေ.
ဗောဓိညောငျရှကျ (အထူးသဖွငျ့- နှလုံး ရောဂါ ရှိသူမြား အတှကျ)
ပငျလယျခရုခှံမြား (စကွာဝဠာ စှမျးအငျကွောငျ့ ဖွဈပါသညျ။)
ဆနျစေ့ ၂၁- စေ့ (အငျမတနျ အကြိုးမြားပါတယျ။ နောကျပိုငျး ရှငျးပွပေးပါ့မယျ။)
ဂငျြး ဖကျလေးအနညျးငယျ (ငှကေိုဆှဲဆောငျနိုငျစသေညျ)
တချို့လူတွေက မခွဲနိုင်မှန်းသိလေ ရက်စက်လေ အရမ်းချစ်မှန်းသိလေ အနိုင်ယူလေပဲ
ဆေးထိုးချင်စိတ် လွန်ကဲခြင်းနှင့် တစ်သက်စာနောင်တများ…!
September 20, 2019 naethit
March 13, 2020 naethit
တစ်သောင်းတန် တွေထဲမှာ ဗိုလ်ချုပ်ပိုက်ဆံ တစ်ထောင်တန် ရောပါလာခဲ့ရင် အလွယ်ကူဆုံး သိနိုင်တဲ့ နည်းလမ်း
January 20, 2020 naethit
အခုလို အခြေနေမှာ ကျောင်းတော့ (လုံး) မဖွင့်ပေးနိုင်ဘူးလို့ ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောလိုက်တဲ့ ဖိလစ်ပိုင် သမ္မတ
ရက်ရက်စက်စက် ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိန်းကလေးတစ်ဦး အသတ်ခံရမှုမှ လူသတ်တရားခံအား ဖမ်းဆီးရမိ
တော်တော် လူမဆန်တဲ့ ကောင်ပါ မင်္ဂလာပွဲစီစဉ်ပြီးမှ မင်္ဂလာဆောင်ကို မလာခဲ့ဘူး (သူနဲ့ရတဲ့ ကိုယ်ဝန်လည်း ရှိနေတယ်) (61,641)
ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဆီးချိုဖြစ်တဲ့ လူရှိခဲ့ရင် ကူညီပြီး ရှယ်ပေးပါ အင်မတန်မှ လွယ်သူတဲ့ နည်းလေးပါ (58,466)